इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड वाहन उत्पादन ड्राइविंग ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्स मार्केट - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B मार्केटप्लेस समाचार
5 सक्छ, 20214सक्छ, 2021 सन्तोष एम। मार्केट इंटेलिजेंस किन्नुहोस्, बजार विकास, बजार अवसर, बजार अनुसन्धान
ब्रेक घर्षणको माग सवारीको उत्पादनमा बृद्धि भएको हो। निकट भविष्यमा, इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड वाहन क्षेत्रहरूले ब्रेक घर्षणको लागि माग ड्राइभ गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। पर्यावरण अनुकूल र गैर विषैले ब्रेक घर्षण उत्पादन नयाँ विकास क्षेत्रहरू हुनेछन्। ब्रेक फ्रिक्शन (OE) बजारको ब्रेक डिस्क र ब्रेक प्याड क्षेत्रहरू क्रमशः सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने र उच्चतम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्सको बजार २०२० मा १२..12.6 बिलियन डलर हो र २० by० सम्ममा १.2020.१ मिलियन डलर हुने अनुमान छ र २. 16.1% को सीएजीआर दर्ता गर्ने अनुमान गरिएको छ। जब कार चालमा छ, हरेक अटोमोबाइलको ब्रेकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। ब्रेक घर्षण सामग्री, जुन ब्रेक प्याड र ब्रेक लाइनिंग लगायतका धेरै कम्पोनेन्टहरू बाट बनेको हुन्छन्, गतीको उर्जा तापीय ऊर्जामा रूपान्तरण गरेर सवारीहरू सुस्त बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
वरपरको स्थितिमा क्षरण र तातो सहायताको साथ, विश्वव्यापी ब्रेक घर्षण सामग्रीहरू सक्रिय ऊर्जालाई न्यानो उर्जामा रूपान्तरण गरेर गाडीलाई ढिला बनाउन प्रयोग गरिन्छ। ब्रेक घर्षणको माग विश्वव्यापी रूपमा सवारी उत्पादनको वृद्धि द्वारा संचालित भइरहेको छ। ब्रेक फ्रिक्शन सिस्टमको मागलाई बढाउने अर्को प्रमुख कारक भनेको बढ्दो ट्राफिक भीड हो, जुन आउँदो वर्षहरुमा पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ, परिणामकारी बजारको बृद्धि। निर्माताहरु बीच प्रतिस्पर्धी वातावरण को वृद्धि विश्वव्यापी ब्रेक घर्षण सामग्री बजार को विस्तार गर्न को अवसर प्रदान गर्दै छ।
विकसित देशहरूमा, गाडीहरूमा डिस्क ब्रेक प्रणाली स्थापनाको दर उच्च छ, र यो भारत र ब्राजिल जस्ता विकासशील देशहरूमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस बजारमा अवस्थित आगामी ट्रेन्डहरू र अन्तर्दृष्टिहरू जान्न, लिंक क्लिक गर्नुहोस् यहाँ
फेडरल मोगल र रबर्ट बॉशले अफ्टरमार्केट आईटमहरू सुरू गर्यो।
HEV हरू विश्वव्यापी इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड वाहन बिक्रीको बहुमतको लागि।
बाट कुञ्जी बजार अन्तर्दृष्टि रिपोर्ट:
ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्सको बजार २०२० मा १२..12.6 बिलियन डलर हो र २० by० सम्ममा १.2020.१ मिलियन डलर हुने अनुमान छ र २. 16.1% को सीएजीआर दर्ता गर्ने अनुमान गरिएको छ। ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्स मार्केट प्रकार, अनुप्रयोग र क्षेत्रको आधारमा विभाजित गरिएको छ।
प्रकार अनुसार, ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्स मार्केट ब्रेक प्याड, ब्रेक जुत्ता, र अन्यमा विभाजित छ।
अनुप्रयोग द्वारा, ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्स मार्केट OEM र आफ्टरमार्केटमा विभाजन गरिएको छ।
क्षेत्र अनुसार, ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्स मार्केट उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका, र मध्य पूर्व र अफ्रिकामा विभाजित छ।
ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्स मार्केटमा कार्यरत प्रमुख खेलाडीहरूले रोबर्ट बॉश जीएमबीएच, आइसिन सेकी को लिमिटेड, अकेबोनो ब्रेक इण्डस्ट्री कं, कन्टिनेन्टल एजी, डेल्फी अटोमोटिव पीएलसी, डो Dongियाying्ग Xinyi ऑटोमोबाइल फिटिंग कं लिमिटेड, फेडरल-मोगल मोटरपार्ट्स LLC, Fras Le SA, जापान ब्रेक औद्योगिक कम्पनी लिमिटेड, नान होंग ट्राफिक इन्स्ट्रुमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्
सांप्रदायिक समाचार इलेक्ट्रिक र संकर वाहनहरू ग्लोबल ब्रेक फ्रिक्शन पार्ट्स मार्केट